Qardho:-Qeybaha kala duwan ee bulshada, sida odayaasha, aqoonyahanka, culimada, dhalinyarada iyo haweenka ka soo jeeda gobolada Puntland ayaa waxa ay soo jeedinayaan in la qaboojiyo dagaallada dhiiggu ku daadanayaan ee u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee ku diriraya deegaanka degmada Rako ee gobolka Karkaar.
Dhamaan dadka baaqyada diraya ayaa waxa ay ka tacsidayeynayaan dadkii ku dhintay dagaalada soconaya, iyagoo eheladii ay sida gaarka ah uga baxeen Illaahay uga baryey samir iyo imaan iyo bedel kheyr qaba.
Waxgaradka ayaa odayaasha iyo dowladda Puntland ugu baaqayaan inay arinta u xaliyaan sida ugu macquulsan, iyadoo dal iyo dibadba ay ka socoto qeylo dhaanta lagu qaboojinayo mashaakilkaan soo noqnoqday.
Shalay galinkii dambe ayey aheyd markii maleeshiyaad ka soo kala jeeda beelaha Cali Saleebaan iyo Ugaar Saleebaan ee walaalaha ay ay ku dirireen deegaanka Degmada Rako, waxaana dagaalladaasi ku dhintay dad kor u dhaafaya 10 qof.
Dagaallada u dhexeeya maleeshiyaadka labada beel ee walaalaha ah ayaa in dhaweydba soo noqnoqonayey, iyadoo mashaakilka ugu weyn ee hadda Puntland ka jira uu yahay dilalka ku saleysan aanooyinka qabiilka oo marka dambe isu roga dagaallo dhiig badani ku daataan.